Uber neRyft: Wiricheya Inowanikwa Mota | Karman® Mawiricheya
Uber uye Lyft: Wiricheya Inowanikwa Mota
Posted on April 17, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Uber uye Lyft vaviri vanozivikanwa kutakura makambani akachinja nzira vanhu senga pachavo kwavanosvika. Makambani ese ari maviri akagadzira mikana yebasa kune vanhu vezuva nezuva kuti kutyaira vafambi kwavanoenda. Izvi zvinobvumira iyo passenger kusazvidya moyo nezvekukwazisa kombi kubva munzira kana kubata nekushushikana kwetraffic. Kuti ushandise iyo zvekufambisa mabasa, vafambi vangangoda kudhawunirodha iyo Uber kana / uye Lyft's app pane yavo nhare mbozha.
Nekuenderera kuri kuzivikanwa kwe kushandisa Uber kana Lyft kuenda kunzvimbo, makambani maviri ane kuvandudza pabumbiro ravo kuti rienderane zvakanyanya nezve zvinodiwa nevatengi. Imwe yekufambira mberi kukuru yaive yekugara vanhu nayo mavhiripu kana akaremara.
Uber yakagadzira yakasarudzika app, inonzi uberAccess, for wiricheya vashandisi kushandisa.
Pane sarudzo mbiri dzaungasarudza kubva riinhi kushandisa uberAccess:
uberASSIST - yakagadzirirwa kupa rubatsiro kune vanhu vakaremara uye vakuru mune mota. Vatyairi vanodzidziswa kugara kufamba zvigadzirwa, senge mavhiripu, vanofamba, uye scooter.
uberWAVER - inobvumira vafambi vakaremara kukumbira wiricheya inowanikwa motokari. Mota dzakashongedzerwa ne ramp kana kusimudza.
Kana zviri ikozvino, uberAccess inowanikwa kumaguta anotevera:
New York (Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island, NYC, uye Manhattan)
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kuwanikwa kwaUber, ndapota tinya pano.
Ridhi yakagadzira sevhisi inonzi iyo Zvinowanikwa Kutakura Mota nokuti vanoshandisa wiricheya. Icho basa uko Lyft inoshanda neakasiyana Zvinowanikwa taxi services ku gara newiricheya vanoshandisa. Vanoshandisa wiricheya ingangoda kugonesa nzira yekuwana pane iyo app. Kana iyo nzira yekuwana ikabvumidzwa, mota dzinokwanisa kugara mavhiripu ichashandiswa kutora iyo vafambi kwavanoenda. Kana maguta asina Zvinowanikwa mota dziripo, vafambi vanogashira meseji maererano neruzivo nezve nharaunda masevhisi kana kukwirwa kuchikumbira. Imwe paratransit yemuno uye Zvinowanikwa mota ingangoda kuverengerwa zvisati zvaitika maawa makumi maviri nemana.
Kugonesa iyo "Pinda" Maitiro pane iyo Lyft app:
Enda kumenyu uye tora pane Zvirongwa
Pasi pemagadzirirwo, tinya pane Services
Pa peji reSevhisi, tinya 'Kuwana' kugonesa nzira yekuwana
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kuwanikwa kweLyft, ndapota tinya pano.
Via uber.com uye lyft.com
Wiricheya Inokwanisika Kukwira Makwara
Accessmap Inotsvaga Nzira dzevanofamba-famba Kune Avo Vane Zvishoma Zvokufamba